नेकपा माओवादी केन्द्रले पर्वतमा स्थानीय तहमा इन्चार्ज तोक्यो ! – ebaglung.com
नेकपा माओवादी केन्द्रले पर्वतमा स्थानीय तहमा इन्चार्ज तोक्यो !
२०७३ चैत्र १६, बुधबार १६:५३	अन्य समाचार
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७३ चैत १६ । माओवादी केन्द्र पर्वतले स्थानीय निकायको चुनावलाई लक्षित गरी गाउँ जागरण अभियान तथा कमिटिलाई पुनर्गठन गर्दै स्थानीय निकायका लागि संयोजक समेत तोकेको छ । केन्द्रले दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा रहेका पुराना कमिटीहरु विघटन गरेर नयाँ कमिटीका लागि संयोजक र सहसंयोजक तोकेको हो ।
इन्चार्ज र संयोजकले स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरी पुराना गाउँ कमिटिलाई भंग गर्दै नयाँ कमिटि गठन गर्ने जिम्मा दिइएको केन्द्रिय सदस्य दिपक आचार्यले जानकारी दिए ।
केन्द्रिय सदस्यहरुलाई स्थानीय तहको संयोजकका रुपमा चयन गरेको छ भने सोही अनुसार नयाँ कार्य समिति समेत गठन गरिएको छ ।
कुश्मा नगरपालिकाको इन्चार्जमा सुदिप कुवँर र संयोजकमा शंकर गिरी रहेका छन् । त्यस्तै फलेवास नगरपालिकामा इन्चार्ज प्रेम राना, संयोजक भुवन शर्मा पौडेललाई तोकेको छ । जलजला गाउँपालिका इन्चार्ज बाबुराम कार्की, संयोजक दिपक आचार्यलाई पार्टीले तोकेको छ । मोदी गाउँपालिकामा इन्चार्ज कृष्ण विक, संयोजक मनबहादुर पौडेल रहेका छन् । विहादी गाउँपालिकामा केन्द्रिय सदस्य कृष्ण पराजुलीको अध्यक्षतामा विहादी गाउँपालिकामा नयाँ कमिटि गठन भैसकेको छ । महाशिला गाउँपालिका इन्चार्ज दुर्गा गुरुङ चयन भएका छन् । त्यस्तै पैयूँ गाउँपािलका इन्चार्ज जयनारायण तिवारी, सहइन्चार्ज पुर्णपसाद आचार्य, संयोजक काशीराम काफ्ले रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको बैठकले सबै स्थानीय तहका सदस्यमा साविकका गाउँ कमिटीका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र सोही तहभित्र रहेको क्षेत्रीय कमिटीका सदस्यहरु स्वतः सदस्य हुने निर्णय गरेको छ । २१ सदस्यीय गाउँ तथा नगरपालिका स्तरीय कमिटि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रले चैत्र मसान्तभित्र गाउँ तथा नगरपालिका स्तरीय कमिटि गठन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
पत्रकार महासंघको भवन निर्माण अभियान शुरु : पहिलो दिन रु. १० लाख संकलन !
गल्कोटमा ६८ वर्षिया महिलाको रहस्यमय मृत्यु, लुटपाटका लागि हत्या गरिएको आशंका !